Ngwa 4 iji rụkwaa foto ndị mebiri emebi ma weghachite ha | Akụkọ akụrụngwa
Kedu ihe ga - eme mgbe echekwara foto anyị na CD-ROM ma ya onwe ya nwere ndị ọrụ ọjọọ? Ọfọn, anyị nwere ike ịmalite ịkwa ụta na emebeghị nkwado ndabere ọzọ, n'ihi na ekwuru onyonyo ma ọ bụ foto nwere ike ịnọ na "ajọ ngalaba" a ọ bụ ya mere-agaghị ekwe omume na-agbalị na-agbake ha mfe. Dị ka anyị nwere ike mezie foto mebiri emebi n'ọnọdụ ndị a?
Na elu anyị etinyela onyonyo nke nwere ike ịbụ nsonazụ nke ihe ihe onyonyo onyonyo Windows na-egosi n'ozuzu mgbe ọ chọtara ụdị faịlụ ndị a nwere ntụpọ. Ọ bụrụ na ịchọtala onwe gị n'ọnọdụ a dị mwute ma na ị na-achọ ịtụfu ihe ndekọ ndị a ebe ị nọ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke foto dị mkpa (ezinụlọ ma ọ bụ ọrụ) Anyị na-atụ aro ka ị gụọ isiokwu na-esonụ, n'ihi na ebe a anyị ga-ekwupụta ngwa ole na ole ị nwere ike iji gbalịa nwetaghachi foto ndị ahụ. Otu n'ime ha bụ n'efu ka a zụrụ ndị ọzọ, ọ bụ ezie na enwere ike ibudata ụdị nyocha iji hụ nsonaazụ na arụmọrụ nke ngwa ọrụ ahụ.
1 Ntughari echiche tupu idozi foto ndi mebiri emebi
2 Ngwa iji rụkwaa foto ndị mebiri emebi
2.1 Kpakpando Phoenix JPEG Mmezi 2
2.2 Dọkịta Foto
2.3 Mmezi Faịlụ
2.4 Pix mgbake
3 Ngwa ịrụkwa foto mebiri emebi na Mac
3.2 Iweghachite data iSkysoft
3.3 Iweghachite data OneSafe
4 Ngwa iji rụkwaa foto ndị emerụrụ emerụ na gam akporo
4.1 Iweghachite Foto
4.2 Weghachi Foto
4.3 Naghachi foto ehichapụ
5 Ngwa imezi foto ndị mebiri emebi na iPhone
Ntughari echiche tupu idozi foto ndi mebiri emebi
Anyị na-enyocha naanị ikpe anyị nwere ihe oyiyi ma ọ bụ foto echekwara na diski CD-ROM, nke nwere ike inwe mpaghara dị njọ. Ọnọdụ ahụ nwekwara ike ime na faịlụ ndị akwadoro na eriri USB yana draịvụ ike yana, n'agbanyeghị nke ahụ, enweghị ike igosipụta onye na-ekiri ya ngwa ngwa n'ihi ụfọdụ mbibi dị iche iche nke enwere ike ibute site na nje nke koodu ọjọọ.
Ọnọdụ ọ bụla bilitere tupu idozi foto ndị mebiri emebi, onye ọrụ ga-emerịrị gbalịa mepụta otu onyonyo ndị a (faịlụ ọjọọ) gaa ebe ọzọ na draịvụ ike kọmputa n'ihi na site n'ebe ahụ, ọ ga-adị mfe karị ịnwa ịgbake foto ndị mebiri emebi ma ọ bụ mezie ha.
N’okpuru, ị ga - ahụ usoro ọrụ niile ga - enyere gị aka weghachite onyonyo mebiri emebi.
Ngwa iji rụkwaa foto ndị mebiri emebi
Kpakpando Phoenix JPEG Mmezi 2
Ngwá ọrụ a iji rụkwaa foto ndị mebiri emebi nwere ike inyere anyị aka ebumnuche ahụ ekwuputara, n'agbanyeghị na a ga-eji akwụkwọ ikike gọọmentị zụta ya. Dabere na onye nrụpụta ahụ, atụmatụ ya nwere ohere ịmezi faịlụ onyonyo dị na usoro jpeg na nke ugbu a, na-egosi dị ka emerụ ma ọ bụ mebiri emebi.
Ngwa a nwere ike ịnwe ike iweghachite ozi nke foto ndị a ọbụlagodi sistemụ arụmọrụ (Windows) atụ aro site na ozi dị iche iche, na faịlụ ahụ mebiri kpamkpam. Banyere ya ọrụ interface, anyị na mkpa iji họrọ foto (mebiri emebi faịlụ) ịdọrọ ha n'elu ngwá ọrụ interface wee pịa bọtịnụ na-amalite mweghachi usoro.
Na ngwá ọrụ a anyị ga-enwe ohere nke weghachite ozi na faịlụ onyonyo, nke na-enye ndị ọzọ ka mma iji rụọ ọrụ a. Ikekwe n'ihi akụkụ a, ọ bụ na ọnụ ahịa nke ikike iji kwụọ ụgwọ maka ojiji ya dị elu nke ukwuu karịa atụmatụ anyị kwuru n'elu.
Ọrụ arụmọrụ nke ngwá ọrụ a dị ukwuu, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na ọ ga-ekwe omume ịgbake faịlụ na jpeg kamakwa, na Windows (BMP) na ọbụna, na ụdị PSD, ịbụ akụkụ a otu n'ime ihe kachasị mkpa maka ndị na-arụ ọrụ na Adobe Photoshop ma ọ bụ ngwaọrụ ndị yiri ya. N'ihi ya, na ị bụ n'aka nke ya ọrụ, ị nwere ike nwalee ngwá ọrụ na a faịlụ na-nkwarụ na na dị oké mkpa, ọ bụ ezie na ị ga-enweta a watermark na ihe oyiyi nke weghachiri eweghachi faịlụ.
Obi abụọ adịghị ya, Dọkịta Foto bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma maka naghachi foto mebiri emebi.
Ibudata - Foto dị na dọkịta 2
N'ezie, a raara ndị ọzọ nye ịnwa ịrụzi ụdị faịlụ dị iche iche, nke anaghị etinyekarị onyonyo kama kama ọ bụ ụdị dị iche iche. Uru mbu bu na obi uto ya, ịbụ ihe mbụ ọzọ anyị kwesịrị ịmalite iji hụ ma onyogho ma ọ bụ faịlụ anyị rụrụ arụ nwere obere pasent nke ihe ngwọta.
Ndakọrịta na ngwá ọrụ a na-azọpụta na-ezo aka ma faịlụ oyiyi na jpeg yana akwụkwọ PDF, faịlụ egwu, faịlụ vidiyo, akwụkwọ Office n'etiti otutu ndi ozo. The interface bụ nnọọ mfe ma dị mfe iji n'ihi na naanị, anyị nwere ịchọta ebe oyiyi ma ọ bụ mebiri emebi faịlụ a na emi odude wee pịa bọtịnụ na-amalite mweghachi usoro.
You wee File Mmezi mezie foto mebiri emebi?
Ibudata - Mmezi Njikwa 2.1
A ga-ejikwa ikike gọọmentị zụta ihe ọzọ iji rụkwaa foto ndị mebiri emebi. Ndakọrịta bụ a bit ọtụtụ karịa ihe gara aga ngwa na-enye ọ bụ ezie, gbakwasara naanị oyiyi faịlụ na rụrụ arụ ndi (mebiri emebi).
Ndakọrịta na-ezo aka na faịlụ onyonyo n'ụdị jpeg, bmp, tiff, gif, png na nke ndu, ịbụ ya mere ọ bụ ezigbo ihe ọzọ n'ihi na ọ bụ ya, anyị nwere ngalaba ọrụ ka mma n'ịgwọ ụdị nsogbu a.
Site na usoro ọzọ ndị anyị kwurula, ịnwere ike ịnwa iweghachite foto ndị nwere ike ịbụ na ụfọdụ ndị na-ajụ ihe anụ ahụ na ndị ngalaba ha mebiri emebi. Ọ dị ezigbo mkpa ịnwale jiri usoro nnwale tupu ịkwụ ụgwọ maka ikikere n'ihi na ị maghị ma ọ bụrụ na anyị ga-enwe nsonaazụ dị irè n'ezie n'agbanyeghị nkwupụta ndị mmepe ya nwere ike ịme.
Ibudata - PixRecovery 3
Ngwa ịrụkwa foto mebiri emebi na Mac
Ezigbo ngwa, site na otu ndị mmepe ahụ dị ka nsụgharị Windows ahụ a kpọtụrụ aha n'elu, nke na-enye anyị ohere ọ bụghị naanị iji weghachite foto niile dị na mpaghara ọjọọ nke draịvụ ike anyị ma ọ bụ kaadị ebe nchekwa, kamakwa -enye anyị ohere iji naghachi ọ bụla video ma ọ bụ music faịlụ.
Ọ na-enye anyị ohere iji weghachite foto, vidiyo ma ọ bụ faịlụ egwu nke anyị kpochapụrụ na mbụ, yabụ nwere ike bụrụ ndụ anyị zuru oke maka ụdị ọnọdụ ọ bụla nke adịghị mma nke usoro nchekwa na-emetụta ncheta anyị ma ọ bụ n'ihi na emebila oge.
Budata Stellar Phoenix Photo Recovery
Iweghachite data iSkysoft
Nke a bụ ngwa ọzọ, tinyere nke gara aga, nke na-enye nsonaazụ kacha mma n'ime teknụzụ teknụzụ Apple desktop. Iweghachite data iSkysoft na-enye anyị ohere iji weghachite ihe ọ bụla faịlụ dị na ngalaba ntụpọ nke draịvụ ike anyị ma ọ bụ kaadị ebe nchekwa, gụnyere foto, vidiyo, ozi ịntanetị, akwụkwọ, faịlụ egwu ... ọ dakọtara na ngwaọrụ ọ bụla anyị jikọtara na kọmputa anyị, n'ihi ya, anyị nwekwara ike iji ya iji weghachite ozi site na kọmpat igwefoto na esịtidem ebe nchekwa ma ọ bụ site na gam akporo ọnụ na foto na vidiyo na-natara na-emi odude ke ebe nchekwa nke ngwaọrụ.
Budata iSkysoft Data Recovery
Iweghachite data OneSafe
Anyị na-emezigharị nhọrọ iji weghachite onyonyo ma ọ bụ vidiyo ndị mebiri emebi na ngwaọrụ anyị na OneSafe Data Recovery, ngwa nke na-enye anyị ohere ijikọ ngwaọrụ ọ bụla na Mac anyị iji weghachite ozi dị n'ime, ma ha bụ foto, vidiyo ma ọ bụ akwụkwọ nke ụdị ọ bụla.
Budata OneSafe Date Recovery
Ngwa iji rụkwaa foto ndị emerụrụ emerụ na gam akporo
Ebumnuche nke Android na-enye anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa mgbe ọ na-agbake iji weghachite foto ndị mebiri emebi ma ọ bụ data ọ bụla ọzọ rụrụ arụ site na njedebe anyị, ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịnweta mgbọrọgwụ nke usoro ahụ n'oge ọ bụla, ihe anyị na-enweghị ike ime na gburugburu ebe obibi nke igwe. Manzana. Ka oge na-aga, ncheta nchekwa na-akawanye njọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na esiteghị na ụdị ndị ama ama, yabụ ọ bụ ihe amamihe dị na itinyekwu obere oge tinye ego na nchekwa echiche anyị.
Ihe ntinye ihe ntinye foto na-enye anyị ohere iji weghachite foto ndị achọtara na mpaghara ọjọọ site ụzọ abụọ Nke anyị ga-enweta ezigbo nsonaazụ, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ebe nchekwa ebe foto dị na-emebi emebi, ọ bụghị ngwa a ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ ebube. Methodzọ mbu jiri algorithm mgbake bụ nke na-enye anyị nsonaazụ n'ụzọ ọsọ ọsọ ma dị irè karị. Nke abụọ bụ ihe amamihe dị na nke mbụ enyebeghị ezigbo nsonaazụ n'ihi mmebi nke nchekwa dị n'ime ma ọ bụ SD ebe ihe oyiyi ahụ dị nwere ike ịta ahụhụ.
Developer: Peri na-acha odo odo PI
Ezie na ọ bụ eziokwu na mgbake usoro nke mebiri emebi ma ọ bụ ehichapụ foto dị nwayọ nwayọ, ngwa a Ọ bụ otu n'ime ihe ndị na-enye nsonaazụ kacha mma. Ozugbo Weghachi Foto amalite, ngwa ahụ na-eme nyocha zuru oke nke nhọrọ nchekwa niile nke ngwaọrụ ahụ nwere, nke ime ma ọ bụ nke mpụga. N'adịghị ka ngwa ndị ọzọ chọrọ ikikere mgbọrọgwụ, Iweghachite foto na-arụ ezigbo ọrụ na-enweghị mkpa ahụ.
Weghachi Foto Foto
Naghachi ihe oyiyi ehichapụ ọ bụghị naanị na-enye anyị ohere i ofomi n'ime ọdụ anyị na ịchọ ihe onyonyo nke anyị nwee ike ihichapụ n'amaghị ama, mana ọ na-elekọtakwa iwepụta onyogho niile ahụ mebiri site na ọnọdụ dị na ngalaba nchekwa ebe ha dị. Dị ka ngwa gara aga, ọ dakọtara na ụdị onyonyo niile ọ chọghị ikikere mgbọrọgwụ n'oge ọ bụla iji nwee ike ịrụ ọrụ ya, ọrụ nke n'agbanyeghị na-eme nke ọma.
Ngwa imezi foto ndị mebiri emebi na iPhone
E gosipụtara usoro okike nke ekwentị Apple dịka otu n'ime oghere kachasị na ahịa, ihe megidere ya. Inwe ike ịnweta mgbọrọgwụ nke ngwaọrụ anyị bụ ọrụ na-adịgide relegated naanị ndị ọrụ na-arụ jailbreak na ngwaọrụ gị, a jailbreak na-aghọ esiwanye ike inweta, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime hackers ndị raara onwe ha nye ọrụ a na-arahụ na nke ndi oru aka inweta ụgwọ ọrụ maka ha nchọpụta aga-eme ịchọta vulnerability na usoro. N'ihi njedebe nke ọ na-enye anyị, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime iji zere inwe nsogbu na ngwaọrụ anyị yana na anyị enweghị ike iweghachite foto anyị nwere na ya, bụ iji ọrụ nchekwa igwe ojii na-elekọta mee otu foto ọ bụla na vidiyo anyị na-eme.
Na ahịa anyị na o siri ike ịhụ ngwa na-ekwe ka anyị ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ na-ekwu na-ekwe ka anyị na-agbake data anyị iPhone ma ọ bụrụ na ọ kwụsịrị na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. EaseUS MobiSaver, ngwa a na-akwụ ụgwọ, mana nke ahụ na-enye anyị ohere ịnwale ụdị nke anaghị akwụ ụgwọ, nke anyị nwere ike iji ya naghachi ụdị ozi ọ bụla na ngwaọrụ Apple anyị Ọ bụrụhaala na ọ mebighị emebi na PC ma ọ bụ Mac anyị na-amata ya mgbe anyị na-etinye ya, ọbụlagodi na ihuenyo anaghị agbanye ma ọ bụ nye anyị ọrụ. N'ihi EaseUS MobiSaver anyị nwere ike ịgbake site na foto na vidiyo, kọntaktị, kpọọ akụkọ ihe mere eme, ibe edokọbara Safari, ozi, ncheta, ndetu ... Mgbe anyị jikọtara iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka na kọmputa anyị, ngwa ahụ ga-enye anyị mgbake abụọ. nhọrọ: site na nkwado ndabere iTunes (nke anyị ga-emerịrị na mbụ) ma ọ bụ ozugbo na ngwaọrụ anyị.
Budata EaseUS MobiSaver
You maara mmemme karịa maka mezie foto mebiri emebi? Kedu nke ị jirila nke ọma? Gwa anyị banyere ahụmịhe gị na usoro ị gbasoro iji weghachite foto ndị mebiri emebi maka ihe ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Rụkwaa foto mebiri emebi
ọdịnaya na-enye aka na ihe ọmụma
Onyinye Albert dijo
Ihe dị egwu! Enwetaghachiri m ọtụtụ ihe oyiyi jpg.
Zaghachi Albert Costil
Ndewo Albert, n'ime onye n'ime ha ka ị nwere ike iweghachite ha?
Zaghachi na Pao
IHE B PR PRB YOUR YOU I KWADAS IM IMEJI gị. IHE DPP M KA B THAT NA NAAN ONE OTU IHE IME HENR THE, IZU B IS AK SOLKỌ SỌP .R..
ọ dighi onye n mejerem ozi. Ihe oyiyi ahụ mebiri emebi mgbe m tinyere kaadi sd nke igwefoto ahụ na kọmputa, ọ daa na m ga-ewepụ ya, mgbe m jikọtara foto ahụ mebiri emebi. ndị na-ekiri ihe oyiyi windo na-agwa m ihe efu.
Riki otu ihe ahụ mere m, my micro sd mebiri foto m na vidiyo, a kwadoro na ọtụtụ mmemme mana ha niile ga-agbake foto ehichapụ iji weghachite foto ndị mebiri emebi site na micro sd… .. Ọ bụrụ na mmadụ maara etu esi mezie foto mebiri emebi , nyere m aka. Ha bụ foto nke ncheta ọmụmụ ụmụ ụmụ m abụọ, m ga-ekele ha nke ukwuu
Riki otu ihe ahụ mere m, my micro sd mebiri foto m na vidiyo, a nwalela ya na ọtụtụ mmemme mana ha niile bụ iji nwetaghachi foto ehichapụ, ọ bụghị iji weghachite foto ndị mebiri emebi site na micro sd… .. Ọ bụrụ na mmadụ maara otu esi edozi foto mebiri emebi, nyere m aka. Ha bụ foto nke ncheta ọmụmụ ụmụ ụmụ m abụọ, m ga-enwe ekele maka ha
Ndewo, otu ihe ahụ mere m na foto ndị dị na kaadị iji nyefee ya na kọmputa ahụ, ọ malitegharịrị n'onwe ya na enweghị m ike imeghe foto ndị ahụ, n'agbanyeghị agbanyeghị ọtụtụ mmemme na-emeghị ihe ọ bụla, enwere m ndakpọ olileanya, ị hụrụ mmemme iji weghachite foto gị, m ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka, daalụ
Zaghachi Carmen Rosa
hello na nke m, foto mepere na windo ndị na-ekiri windo ma isi awọ ma ọ bụ ọkọ na-apụta na foto nke ahụ bụ ihe m chọrọ mana ọ nweghị nke mmemme na-edozi ya.
luis miguel copa aria dijo
As agi to re uoersr foto m nyere ya ka ọ kwaga na kaadị ebe nchekwa wee ihe onyo wee pụta ihe amiracion sign na nwa na ụfọdụ x iberibe nke m nwere ike ime xfavor nyere m aka xfa xfa ndị enyi dị ezigbo mkpa foto xfavour
Zaghachi luis miguel copa arias
Ngwa 4 anaghị akwụ ụgwọ, mana kpachara anya, ị ga-azụta akwụkwọ ikike akwụ ụgwọ iji jiri xD
A na-akwụ ha ụgwọ, ọ dịghị onye n'ime ha nwere onwe ha, n'ime ha niile ị ga-akwụ ụgwọ na nke ahụ, ọ ga-abụ na ha abaghị uru ...
200 MB N'efu na SD DATA NTECTA ỌH GOROG ỌR AND ỌR AND NA Ọ B AND EGO KWES ALR AL KWES INR IN KWES SOR SO KWES SOR SO KWES SOR YOU KWES 200R YOU YOUMATA XNUMX MB ỌZỌ. AKWOGKWỌ abụọ ahụ dị na SOFTONIC.
Olympus OM-D E-M10 Mark III, retro aka na ezigbo maka njem
Akara 2 dị ugbu a na PlayStation 4 na Xbox One